Miaraka aminay no ahitanao ny teny faran'izay tsara indrindra, teny sy fahendrena momba ny hatsaran-tarehy sy ny tsara, voalahatra araka ny abidia ary aseho mazava ho anao.
Teny nalaina momba ny hatsarana sy ny maha-kanto
Ireo teny nindramina hitanay dia mety ihany koa ho toy ny lahatsoratra hanaporofoana ny fitiavana na ho an'ny hafatra Whatsapp.
Teny nalaina momba ny hatsaran-tarehy - © Dan Race / Adobe Stock
Jereo amin'ny alàlan'ny fijerinay ny teny manintona momba ny hatsaran-tarehy sy ny hatsaran'ireo mpanoratra isan-karazany amin'ny vanim-potoana maro:
Izany irery no tena mahafinaritra, izay mbola miseho toy ny tamin'ny andro voalohany, rehefa afaka taona maro. Józef Ignacy Kraszewski
Ny zava-drehetra tsara tarehy dia mangetaheta anao amin'ny hatsarana sy fahalavorariana tonga lafatra kokoa. Christian Morgenstern
Ny tsara dia ilaina toy ny mahasoa ihany koa. Mety mihoatra izany. Victor Hugo
Ny tsara tarehy dia tsy inona fa ny fitsarana an-tendrony mahafinaritra. Theocritus
Ny herin'ny tarehy tsara tarehy, mamporisika ahy izany! Tsy misy na inona na inona eto an-tany manome ahy fahafinaretana mitovy. Michelangelo
Ny hatsarana no tiana indrindra Rehefa tsy fantany izay ankafiziny antsika. Eduard Heinrich Go
Ny hatsarana dia voninkazo misy hatsaram-panahy. Chrysippus
Ny hatsaran-tarehy dia zavatra mampatahotra sy mistery. Fyodor Michailowitsch Dostoevsky
Ny hatsaram-panahin'ny olombelona dia entin'ny tsara tarehy. Christian Oeser
Misy hatsarana izay tsy ho very mihitsy satria hatsaran-tarehy kokoa noho ny endrika. Julius Rodenberg
Amin'ny hatsarana dia mandresy ilay hevitra ilay hevitra, amin'ny ratsy tarehy dia manjaka noho ny hevitra ilay raharaha. Carl Ludwig Schleich
Fahadisoako, noho izany, raha nomen'andriamanitra hery mihoatra ny fahendrena ny hatsaran-tarehy? Pericles
Ny hatsaran-tarehy rehetra dia simba izay tsy misandratra avy amin'ny andriana ao amin'ny fanahy, avy amin'ny fahatsoran'ny toetra. Luise Otto-Peters
Ny hevitra rehetra momba ny hatsarana ara-panahy dia mijery ny votoatin'ny andriamanitra. Moses Mendelssohn
Ny hatsaran-tarehy ara-batana dia taratasy fanolorana tena tsara rehefa mifampiraharaha amin'ny olona, ​​fa tsy izany. Marie Charlotte Hensel
Ny hatsaran-tarehy lahy dia tsy mahomby firy matetika ho an'ny mpanakanto, angamba satria tena mahalana izy io. Georg Forster
Ny feo mahafinaritra dia manintona kokoa noho ny hatsarana; Ilay teo aloha dia mandravaka ny tena; herin'ny fanahy izany. Johann Gottfried von Herder
Ny hatsarana ara-moraly sy voajanahary dia tsapa mihoatra noho ny takatra. David Hume
Mijere indroa raha te hahita ara-dalàna. Aza mijery afa-tsy hahita ny tsara tarehy. Henri-Frédéric Amiel
Izay rehetra mampitony ny fanahy dia tsara tarehy. Friedrich Naumann
Mahafinaritra ahy daholo ny zava-drehetra ary izany no tadiaviny amin'ny fomba tsy manelingelina. Karl Gutzkow
Ny tsara dia inona no sady manintona no ambony. August Wilhelm von Schlegel
Ka ny hatsarana dia tsy inona fa ny fahalalahana miseho. Friedrich von Schiller
Mandresy ny hatezerana rehetra ny hatsarana. Johann Wolfgang von Goethe
Mameno ny maso ny hatsarana, fa mamela ny vava sy ny vavony matetika. Friedrich Muller
Ny hatsarana dia hatsaran-tarehy, azo ampiharina ary mahasoa. Platon
Ny hatsarana no taratasy tolo-kevitra tsara indrindra. Aristote
Ny hatsarana dia firindrana tanteraka amin'ny ara-nofo amin'ny ara-panahy. Franz Grillparzer
Fanomezana tsy mahafinaritra ny hatsarana. Mahatonga ny olon-tiana ho zava-poana, ary rehefa mandositra izy, dia mamela azy halahelo sy foana. Johann Gottfried von Herder
Ny hatsarana dia fananana voajanahary. Plato
Ny hatsaran-tarehy dia taratasy fanoloran-kevitra misokatra izay mandresy am-po antsika mialoha. Arthur Schopenhauer
Ny hatsarana dia fanahy manana vatana ara-nofo. Bettina von Arnim
Ny hatsaran-tarehy dia tsy misy ambara, fa fananana sarobidy io rehefa mahantra ianao na tsy misy saina. Ken Hubbard
Araka izany, ny hatsarana dia tsy misy raha tsy rehefa misy fahitana azy. Heinrich Martin
Ny hatsaran-tarehy dia eo imason'ny olona mijery. Thucydides
Ny hatsaran-tarehy dia vidiana amin'ny endrik'ilay mpifaninana fotsiny, fa tsy voafehin'ny zon'ny mpivarotra. William Shakespeare
Ny hoe manja dia tsy fanjakana, fa fihetsika, hetsika. Robert Hamerling
Raha mahatsikaritra ny hatsaran'ny hafa ny vehivavy, dia mety hanatsoaka hevitra amin'ity izy fa heveriny ho tsara tarehy kokoa izy. Jean de La Bruyère
Hatraiza ny hatsarana azon'ny fo amin'ny masony! Leonardo da Vinci
Na aiza na aiza ahitako ny hatsarana dia omeko lanja izany ary na inona na inona karazany. Christian Dietrich Grabbe
Ny fisian'ny singa ambony kokoa sy ara-panahy dia tsy maintsy an'ny hatsarana tonga lafatra. Ralph Waldo Emerson
Ho an'ny fahalavorariana ny tsara tarehy, ilaina ny fifanakalozana intuition, ny fahatsapana ary ny eritreritra. Moritz Carrière